Laga bilaabo Maajo 18, 2020, Kaniisadda qaranka iyo bulshooyinka kale ee diimaha ayaa mar kale furi kara kaniisadaha, sunagogyada, masaajidda iyo wixii la mid ah ee ay dadweynaha u fidiyaan. - Corona Denmark
Laga bilaabo Maajo 18, 2020, Kaniisadda qaranka iyo bulshooyinka kale ee diimaha ayaa mar kale furi kara kaniisadaha, sunagogyada, masaajidda iyo wixii la mid ah ee ay dadweynaha u fidiyaan.
Category: Uncategorized @so
Comments Off on Laga bilaabo Maajo 18, 2020, Kaniisadda qaranka iyo bulshooyinka kale ee diimaha ayaa mar kale furi kara kaniisadaha, sunagogyada, masaajidda iyo wixii la mid ah ee ay dadweynaha u fidiyaan.
Halkan waxaad kala socon kartaa tilmaamaha ugu muhiimsan ee mas’uuliyadda dib-u-furista kaniisadda qaranka iyo caqiidooyinka kale. Tilmaamahan oo dhamaystiran waxaa laga heli karaa barta internetka ee Wasaaradda Kaniisadda (af dheenish halkan)
Garaac khdaka tooska ah, haddii shaki kaa galo siddii aad u raaci lahayd tilmaamahan iyo fursdaha aad ku gudan karto caqiidaada.
Mamnuucida isku imaadka ma khusayso dhismayaasha kaniisadda iyo bulsho diimeedyada kale, inta ay qaadi karaan. Siddoo kale mamnuucidu ma khusayso isku imaadka aaska iyo duugta banaanka.
Ogolaanshuhu wuxuu suurta gelinayaa::
Salaadda, cibaadada, salaadda Jimcaha, Masaajidka, kitaabka, milicsiga shaqsiyeed, iwm.
Baabtiiska, xaqiijinta / dabaaldegga / baarka iyo mitzvah-ka, guurka, aasitaanka iyo falal diimeedyada kale ee la midka ah.
Nashaadyada kale ee kaniisadaha, sunagogyada, masaajidda, guryaha sunagoogyada, iyo dhismayaasha kale
Nashaadaadka bannaanka waa inay sii wadaan u hoggaansanaanta mamnuucidda isku imaanshaha, marka laga reebo duugta iyo aaska
Nashaadaadka gudaha waa inay waafaqsanaadaan shuruudaha maamulka ee dhismayaasha, waa in imaanshaha dadweynuhu sidan noqotaa:
1) Waxa la ogol yahay ugu badnaan 1 booqde halkii 4 sqm oo dhul siman ah. Haddii sagxadda dhulku ka yar tahay 4 sqm, marin loo adeegsado 1 booqde ayaa loo ogol yahay.
2) Sida ugu suurtagalsan, dhismayaasha waa in loo habeeyaa si dadku suutagal ugu noqoto inay u kala fogaadaan midba midka kale.
3) Macluumaadka ka socda Golaha Caafimaadka ayaa lagu dhejiyay gudaha dhismaha in dadka leh astaamaha cudurka Coronavirus / COVID-19 ay tahay in ay guriga joogaan, iyo waxyaabaha ku saabsan nadaafadda wanaagsan iyo dhaqanka ku habboon goobta dadweynaha.
4) Shaqaalaha, mutadawiciinta iyo dadka soo booqda meelahan waa inay u hogaansamaan talooyinka Golaha Qaranka Caafimaadka ee ku saabsan nadaafadda wanaagsan iyo dhaqanka habboon.
5) Inta ugu badan ee la awoodi karo, waa in saabuun dareere ah ama aalkolo ku saleysan (70-85%) gacmo nadiifiye, waa inay diyaar u ahaadaan ka qeybgalayaasha iyo booqdayaashaba .
6) Shaqaalaha iyo dadka kale ee laxiriira dhismayaasha waa iney xirtaan galoofyada marka ay keenayaan cuntada aan xirneyn, hadii cuntadu ay taabanayso gacmahooda.
Intaas waxaa sii dheer, waa in la kormeeraa talooyinka guud ee masuuliyiinta caafimaadka ee ka hortaga faafitaanka cudurka.
Xusuusnow inaad ilaaliso masaafada isku jisiga. Waa inay noqotaa ugu yaraan 1 mitir dadka dhexdooda. Xaaladaha ay dhici karto khatarta faafida caabuqa , tusaale ahaan adeegga kaniisadda meelaha heesaha, waa inay noqotaa masaafadu ugu yaraan 2 mitir dadka dhexdooda.
Sidoo kale xusuusnow inaad ilaaliso masaafada isku jirsiga markaad soo galayso iyo marka aad baxaysaba.
Dadka soo booqda ee ku jira khatarta sare waa inay ka fekiraan ka qayb qaadashada nashaadyada kaniisadda ama diimaha kale, ama waa inay raadiyaan siyaabo kale oo ay uga qayb qaadan karaan, tusaale ahaan. internetka ama siyaabooyin kale.
Tilmaamaha loogu talagalay dib-u-furida qorshaysan ee kaniisadda qaranka iyo bulshooyinka kale ee dimaha, waa kuwo is bedbedeli karo, waxayna si joogta ah ugu salaysan yihiin hadba xaalada jirta.
Warbixinihii ugu dambeeyey
Khadka tooska ah ee Corona iyo wada sheekaysigu hada way xidhan yihiin, oo wada sheekaysigii hada majiro. June 9, 2020
Hadda qof kasta oo ka weyn 18 sano waa laga baarayaa Corona. May 27, 2020
Laga bilaabo Maajo 18, 2020, Kaniisadda qaranka iyo bulshooyinka kale ee diimaha ayaa mar kale furi kara kaniisadaha, sunagogyada, masaajidda iyo wixii la mid ah ee ay dadweynaha u fidiyaan. May 20, 2020
Qorshaha dib loogu furayo Deenmaark oo la isla meel dhigay May 12, 2020
Sida loogu dabaaldago ramadan oo xaalada hadeer ee covid-19 April 23, 2020
Wararka oo dhan →
Wararkii ugu dambeeyey ee SIRI
Wararkii ugu dambeeyey ee mino.dk
Smitte|stop-app July 10, 2020
Macluumaad cusub oo ku saabsan tilmaamaha safarka ee Wasaaradda Arimaha Dibadda ee ku saabsan COVID-19 July 8, 2020
Dib u furitaanka Denmark hadda waa marxaladda 3aad June 8, 2020
Xuduudaha qayb ahaan waa la furay, laakiin safarka caalamiga ah wali taladu waa ha safrin May 29, 2020
Hadda waad balansan kartaa baarinta corona – xitaa haddii aadan lahayn astaamaha May 19, 2020
Dawladdu waxay soo bandhigtey istiraatiijiyad cusub oo ku saabsan baarista iyo soo ogaanshaha caabuqa faafa May 13, 2020
Mashruucan waxaa caawinaad ka geystay sandhuuqa Novo Nordisk. Caawinaad lambar NNF20SH0062955